Umkhiqizi kanye noMphakeli we-PVC Cable Trunking Extrusion Line | Qiangsheng
Intambo ye-PVC cable trunking extrusion isetshenziselwa ukwenza iphrofayli le-PVC Encane njengephrofayili ye-PVC Skirting, iphrofayli yekhoneni lodonga, iphrofayili ye-PVC yekhebula le-trunking elinokuma kwesigaba nokuphakama okuhlukile. Ubuso bephrofayili / iphaneli le-PVC lingelashwa ngokuphrinta futhi lifakwe uwoyela ocwebezelayo, noma ngokuphrinta kokudlulisa ukushisa, noma ngokugaya, okungenza umphumela omuhle wokuhlobisa ekhishini, endlini yangasese, kuvulandi nokunye.
Ulayini we-Extrusion ogeleza njengoba ungezansi:
I-SJSZ Series Conical Twin Screw Extruder → Die mold → Vacuum Calibration Table → Haul-offs and Cutting Machine Unite → Stacker → Control cabinet (Qaphela: Eminye Imishini Esizayo, njenge-crusher, mixer, izonikezwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende)
Izici ze-PVC trunking:
I-PVC trunking inezici zokufakwa, ukuvimbela i-arc, ukuvimbela ilangabi nokuzicisha.
Indima ye-PVC trunking:
I-PVC trunking isetshenziselwa ikakhulukazi izintambo zangaphakathi zemishini kagesi. Kumishini kagesi ka-1200V nangaphansi, idlala indima yokuvikela ngomshini nokuvikela ugesi ezintanjeni ezibekwe kuyo. Ngemuva kokusebenzisa i-PVC trunking, i-wiring ilula, i-wiring ihlanzekile, ukufakwa kunokwethenjelwa, futhi kulula ukuthola, ukulungisa nokushintshanisa imigqa.
Kunezinhlobonhlobo eziningi nokucaciswa kwe-PVC trunking. Ngokuya ngamamodeli, kukhona:
Uchungechunge lwe-PVC-20, uchungechunge lwe-PVC-25, uchungechunge lwe-PVC-25F, uchungechunge lwe-PVC-30, uchungechunge lwe-PVC-40, uchungechunge lwe-PVC-40Q, njll.
Ngokuya ngemininingwane ethile, kukhona:
20mm * 12mm, 25mm * 12.5mm, 25mm * 25mm, 30mm * 15mm, 40mm * 20mm, njll.
Langaphambilini Umugqa wokukhiqiza ophahleni nodonga we-PVC
Olandelayo: Umugqa we-PP Ukupakisha ibhande le-extrusion